Mandeha an-jambany ? • AoRaha
Hatraiza no ho fitotongan’ny Ariary? Vitsy amin’ireo Malagasy sahirana mitady ny hanin-kohanina anio no mamaky loha amin’izao fihenan-danjan’ny vola malagasy miohatra amin’ireo vola vahiny fampiasa amin’ny seha-pifanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena izao (Dôlara sy ny Euro). Fa vao mainka mahavalalanina kosa ny fihenahenan’ireo tompon’andraiki-panjakana isan’ambaratongany manoloana ny krizy ara-toekarena mananontanona, raha tsy efa mihatra mihitsy, eto amin’ny firenena noho io toejavatra io.
Aoka tsy hohadinoina mantsy fa firenena tena mbola miankin-doha amin’ny any ivelany isika, na inona lazaintsika momba an’ireo harena isan-karazany tokony hampisandratra antsika, ka rehefa tsy mbola afa-manoatra ihany dia farafaharatsiny mba manana vahaolana hisorohana ny voka-dratsy tena ho goavana, ao aoriana kely ao.
Nankaiza ireo manam-pahaizana ara-toekarena eto amin’ny firenena? Inona no anjara andraikitry ny fanjakana? Variana tokoa any amin’ny fitetezam-paritra sy ny ady tombontsoan’ireo olom-boafidy tokoa ve? Ekena fa miaina ao anatin’ny vesatra nateraky ny krizin’ny valanaretina Covid-19 isika, saingy maneran-tany io ary fototra iorenan’ny fanjakana iray ny fiarovana ny vahoaka ao aminy sy ireo sehatra ary singa manodina ny fiainany andavanandro. Samy miatrika sady niomana amin’ny fanarenana ara-toekarena daholo ihany koa ny firenen-kafa, saingy isika ity toa sanatria mandrimandry manana aretina.
Inona no hasolo an’ireo mpampiasa vola ngeza voatery niala teto Madagasikara? Inona no paikady hahafahana manentsina ny vola vahiny banga tsy miditra eto amintsika noho ny tsy fisian’ny mpizaha tany satria nakatona ny sisin-tany sy ireo sidina avy any ivelany? Ahoana no fomba hivarotana an’ireo vokatra fanondrana satria mety mihena ny mpanjifa noho ny fepetra ara-pahasalamana, toy ny fiverenana amin’ny fihibohana, mihatra any ivelany any? Ahoana no fampihenana ny tahan’ny tsy fisiana asa, na ny tsy fahafahana miasa satria ireo am-perinasa aza voatery naato, mba hampitombo ny sokajin’olona afaka manjifa eto amin’ny firenena?
Mety hisy hiteny fa manana ny valiny amin’ireo santionam-panontaniana mipetraka momba ny ho avin’ny toekarena malagasy ao anatin’ny fohy ezaka ireo ny fanjakana, saingy izay hita sy tsapa ihany no manaporofo an’izany. Io aloha izao ny toe-pahasalaman’ny sandam-bola Ariary. Dia asa hoe hampanonofy tahaka ny ahoana indray ny votoatin’ny lalànan’ny fitantanam-bola, izay ho lany toy ny fandalovan’ny taratasy any amin’ny paositra, ery amin-dry parlemantera ery …